[MAQAAL]: Isbarbar Dhig Kusaabsan Waxqabadkii Labada Madaxweyne Siilaanyo & Muuse 100 Ka Cisho Ee U Horreeyey. W/Q:
Saturday March 24, 2018 - 13:46:56 in Arrimaha Bulshada by Super Admin
Mudane Axmed Maxamed Maxamud Siilaanyo iyo Mudane Muuse Biixi Cabdi waa labada Siyaasi ee Xisbiga Kulmiye ugu kala guulaystay Doorashooyinkii Madaxtooyadda ee sanadadii 2010-kii iyo 2017.
Bixinta Mushaharka Shaqaalaha dawlada Mudo afar bilood ah.
Kordhinta 100% ee Mushaharka Shaqaalaha dawlada
Wuxuu soo dhisay Xukuumad Kooban oo tiradeedu dhamayd 26 Wasiir iyo Wasiir ku Xigeen taas oo noqotay Xukuumadii ugu tirada yarayd ee Somaliland soo marta.
Wuxuu Bilaash ka dhigay lacagta lagu qaadi jiray dugsiyada hoose dhexe ee iskuulada dawlada
Wuxuu dhamaystiray biriishka labaad ee Caasimadda
Wuxuu kor u qaaday Miisaaniyadda qaranka 70% iyadoo sanadkii 2010-kii ee Madaxweyne Siilaanyo ay ahayd 310,259,111,704, halka ay gaadhsiiyeen sanadkii Kowaad ee Xil-haytiisa 527,720,451,875 Iyadoo caddadku Korodhka ee u dhexeeyaa uu noqonayo 217,461,340,153.
Kordhinta 50% ee Kabka dhaqaale ee Xukuumadu siiso Xisbiyadda qaranka,
Dhismayaasha iyo Dayactirka Qasriga Madaxtooyadda iyo in badan oo ka mid ah Wasaaradaha iyo Hay’adaha kale ee dawlada.
Wuxuu dhigay gogol nabadeed oo uu fidiyey beelaha dega Gobolka Sool,Buuhoodle iyo qaybo ka mid ah gobolka Sanaag.
Waxaa Guud ahaan dalka laga fuliyey olole nadaafadeed oo heer qaran ah.
Wuxuu Telefishanka qaranka gaadhsiiyey in laga daawan karo dalalka qaarada Yurub
Wuxuu dhamaystiray qayb ka mid ah Jidka Laamiga ah ee Xidhiidhiya Degmada Dilla iyo Boorama.
In khasnada dawlada ay ku xerootay Cashuurta dekeda iyo ta dawlada dhexe iyadoo hore cashuurta dekedu ugu dhici jirtay xarunta Madaxtooyadda.
Wax ka qabashada Sicir bararka xadhkaha goostay ee ka taagan suuqyada Somaliland ee saamaynta taban ku yeeshay nolosha mujtamaca.
Xalinta qardoofooyinkii ka dhashay doorashadii Madaxtooyadda.
Sidii dadka loogu Jihayn lahaa Wax soo saarka dalaga beeraha si Somaliland u gaadho wax soo saar ay kaga maaranto cuntooyinka dalka dibadiisa inooga yimaada, Hasa yeeshee Madaxweyne Muuse Biixi ilaa hada muu rumayn filashadii umaddu ka sugaysay maadaama ay u arkayeen Siyaasi si dhab ah ula socda xaalada guud ee dalka ee dhinacyada dhaqan/dhaqaale.
Suxufi A/lahi Axmed Jama ( Indho yare )